Kaontera mpandeha ho azy MRB ho an'ny fiara fitateram-bahoaka HPC168
HPC168 dia rafitra fanisana mpandeha mandeha ho azy natokana ho an'ny Bus. Ny ankamaroan'ny kaonteran'ny mpandeha anay dia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasa anao antsipiriany misimisy momba ny kaonteran'ireo mpandeha. Ny kaontera mpandeha HPC168 dia manana mpikirakira haino aman-jery natokana ho an'ny Huawei natokana ho azy, ary mampiasa ny maodely algorithm ho an'ny lalina fakan-tsary avo roa heny hahafantarana ny ampahan-dàlana, ...
Maro amin'ireo rafitry ny fanisana ataonay ny mpandeha no vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasao aminao antsipiriany misimisy momba ny rafitry ny fanisana ataon'ireo mpandeha. Ny rafitra fanisana mpandeha HPC088 dia vokatra manisa isa (98% +) avo lenta ho an'ny mpandeha bus manisa mandeha ho azy miorina amin'ny teknolojia fahitana stereo binocular ary teknolojia famakafakana horonantsary manan-tsaina. Ny fakantsary binocular an'ny mpiara-dia ...
MRB Mobile DVR ho an'ny fiara
Ny dvr finday anay dia misy patanty efatra. Mba hisorohana ny fakana tahaka ny mpanamboatra hafa dia apetrakay amin'ny tranonkala ihany ny ampahany amin'ny fampahalalana. Azafady, mifandraisa amin'ireo mpiasan'ny varotra ataonay, dia handefa fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa izahay. Mobile dvr dia karazana fitaovana fanaraha-maso horonantsary nomerika. Mobile dvr no tena ampiasaina amin'ny fiara fitateram-bahoaka lavitra, fiara fitateram-bahoaka, lamasinina, lalamby ambanin'ny tany ary fitateram-bahoaka hafa, amin'ny filaminam-bahoaka, fiarovana afo, fiarovana ny lalàna momba ny fitantanana ny tanàna vehicl ...
Fakan-tsary MRB Vehicle ho an'ny DVR finday
Ny cctv fiaranay dia misy patanty efatra. Mba hisorohana ny fakana tahaka ny mpanamboatra hafa dia apetrakay amin'ny tranonkala ihany ny ampahany amin'ny fampahalalana. Azafady, mifandraisa amin'ireo mpiasan'ny varotra ataonay, dia handefa fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa izahay. Fiara fakan-tsarimihetsika cctv fiarakodia: (MCD001 179 °) sensor sensor député AHD avo lenta, kalitaon'ny sary famaritana avo lenta, famahana mahomby ny 1920 * 1080. Sud tena marindrano: Diagonal 201, degre 182 marindrano, degre 126 marindrano. Fiara fakan-tsarimihetsika cctv fiara Theoretical val ...